Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Xerada Abqaale Tababar uga Furay Ciidamo ka tirsan Dowladda – Radio Daljir
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Xerada Abqaale Tababar uga Furay Ciidamo ka tirsan Dowladda
Seteembar 10, 2015 7:20 b 0
Khamiis, September 10, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10-9-2015 tababar ugu furay xerada Abqaale oo ku taala Degmada Xarfo Ciidan Booliis ah oo laga kala keenay Gobalada Barri, Karkaar iyo Ceyn ee Puntland.
Madaxweynaha ayaa markii uu gaaray xeradaasi waxaa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo katirsan ciidanka Booliska ee uu halkaasi tababarka ugu furay ,waxaana uu ku dhiirigeliyey in casharada loo dhigayo ay si fiican uga faa’iideystaan si aqoontoodu u kobacdo .
‘’Dawladnimadu waa sharci iyo kala dambeyn , sharciga iyo dawladnimaduna gacmaha iyo lugaha ay ku adeegtaana waa Booliiska iyo maxkamadaha , runtiina muhiim ayaad noo tihiin ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’ Tababarkaan marka uu idiin dhammaado waxaan rajeynayaa in xaquuqdiina aad si joogta ah u heshaan , aysana dhicin dayac dambe oo ciidanka Booliska ah ‘’ Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweynuhu.
Wajiyada Ciidankaan uu tababarka u furay Madaxweynuhu ayaa laga dareemayey farxad iyo reyn reyn, maadama ay furasad muhiim ah u tahay in aqoontooda kor loo qaado , si ay u gutaan waajibaadka shaqo ee horyaala.
Ciidankaan Booliiska ah ayaa waxaa ay isugu jiraan rag iyo dumar, tiradooduna waxaa ay dhantahay ku dhawaad 500-askari, waxaana uu tababarku u soconayaa 45-maalmood.
Madaxweyne Gaas ayaa markii uu tababarka soo furay kadib waxaa uu shacabka Bacaadweyn kula qaxweeyey goob meherad ah oo saaran dhinaca laamiga
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo khadar Cawil
Buug ka Hadlaya khatarta Tahriibka oo lagu soo Bandhigay Garowe